कार्यकारी निर्देशक बनेपछि कुलमानको पहिलो कडा एक्सन, क-कसको चल्यो रुवाबासी ? — Imandarmedia.com
कार्यकारी निर्देशक बनेपछि कुलमानको पहिलो कडा एक्सन, क-कसको चल्यो रुवाबासी ?
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पहिलो दिनबाटै एक्सनमा उत्रिएका छन्। घिसिङले विभिन्न उद्योगहरुले तिर्न बाँकी रहेको बक्यौता रकम उठाउन विशेष पहल लिएर एक्सनमा उत्रिएका हुन्।
हेटौंडाको शिवम् सिमेन्ट उद्योगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी महसुल २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। घिसिङ उत्तः बक्यौता रकम उठाएकै छाड्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।
हेटौंडा–१६ मा रहेको सिमेन्ट सिमेन्ट उद्योगले उद्योग सञ्चालनका लागि लिएको डेडिकेटेड फिडरको महसुल तिर्न आनाकानी गर्दै आएको थियो। अहिले घिसिङले ‘शिवम् सिमेन्टको महसुल जसरी पछि उठाउने भन्दै बहानाबाजी गर्न नपाइन उनको भनाई छ।
केन्द्रको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले शिवम् सिमेन्टलाई अहिलेसम्म छुन सकेको छैन। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रदेश डिभिजन हेटौंडाका कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर शशिभूषण शाहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र परे तापनि आफूले सो उद्योगको विद्युत काट्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्।
केन्द्रसम्म शिवम् सिमेन्टले विभिन्न माग राखेको, निवदेन दिएको कारणले केन्द्रको दबाबमा विद्युत महसुल उठाउन नसकेको उनले बताए। प्राधिकरणले सो बक्यौता महसुल उठाउने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ।
यस्तो छ कुलमानको व्यवस्थापकीय कौशल
त्यो कुकुराकानीको सम्पादित भिडिओ।त्यो बेला लोडसेडिङ हट्नुमा विगतका प्रयासको पक्कै भूमिका थियो। भारतबाट आयातीत बिजुलीको भूमिका थियो। नेपालमै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित नयाँ आयोजनाबाट थप बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको थियो। कुलमानलाई भाग्यले पनि अलिकति साथ दिएको थियो— हिउँदे खोला पग्लिएर ४०-५० मेगावाट बिजुली थप उत्पादन भएको थियो।
कुलमानले आफ्नै कौशल र व्यवस्थापकीय क्षमता प्रयोग गरेर तीनवटा काम गरे।
पहिलो, हिउँदको सुख्खा याममा खोलामा पानी कम हुन्छ र बिजुली कम उत्पादन हुन्छ। तर, नेपालमा पाँचवटा ‘डेली पिकिङ’ आयोजनाहरू छन्— कालीगण्डकी, चिलिमे, मर्स्याङ्दी, माथिल्लो र मध्य-मर्स्याङ्दी। यी आयोजनामा रात र दिनभरी पानी जम्मा गरेर साँझ बिजुलीको माग धेरै भएका समय चलाउन मिल्छ। यी सबै आयोजना पूर्ण क्षमतामा चलाउँदा ३५० मेगावाट जति थप बिजुली उत्पादन हुन्छ।
उनले यी आयोजनासँगै ९० मेगावाटको कुलेखानीलाई पनि आवश्यकताअनुरूप मंसिरदेखि नै राम्ररी चलाए। माघ-फागुनलाई साँच्नुपर्ने आयोजना अहिल्यै चलाएर कुलमान हिरो हुन खोजिरहेको छ। माघमा लोडसेडिङ झनै विकराल हुन्छ’ भन्दै कतिले विरोध गरे।
यी काम मैले मात्र गरेँ भनेर कुलमानले सार्वजनिक रूपमा भनेको कम्तिमा मैले सुनेको छैन। उनले प्राधिकरण टिमलाई, मन्त्रालयलाई, प्रधानमन्त्रीलाई सधैं जस दिएका छन्, जसरी माथिको कुराकानीमा भनेका छन्।
नेकपाले दिन खोजेको सन्देश के हो? हाम्रो राज्यमा क्षमतावान् कुलमानहरूको काम छैन, अवसर पाउन हाम्रो ‘हनुमान’ नै हुनुपर्छ भन्ने हो?